17a-Hydroxyprogesterone အက်စီတိတ်မှုန့် (302-23-8) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / 17a-Hydroxyprogesterone အက်စီတိတ်မှုန့် (၃၀၂-၂၃-၈)
17a-Hydroxyprogesterone အက်စီတိတ်မှုန့် (၃၀၂-၂၃-၈)
3.00 ထဲက 5	အခြေခံ3ဖောက်သည် ratings
SKU: 302-23-8. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင်ဂရမ်မှ 17a-Hydroxyprogesterone Acetate Powder (302-23-8) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အစီအစဉ်အထိစုစည်းခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းစွမ်းရည်ရှိသည်။
17a-Hydroxyprogesterone Acetate Powder (302-23-8) ဗီဒီယို
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်:17a-Hydroxyprogesterone acetate
CAS အမှတ်: 302-23-8
နာမ်: 20-dione, 17-hydroxy-pregn-4-ene-acetate
17a-Hydroxyprogesterone Acetate အမှုန့် (302-23-8): Description:
17a-Hydroxyprogesterone acetate သည် Megestrol acetate ၏အညစ်အကြေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Megestrol acetate သည်17α-hydroxyprogesterone အုပ်စု၏ steroidal progestin ဖြစ်ပြီးရင်သားကင်ဆာနှင့် endometrial ကင်ဆာကုသမှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာ MGA နှင့်မတူဘဲလက်တွေ့အသုံးပြုရန်ဘယ်တော့မှမရောင်းချသောမက်ဂက်စထရော၏ ၁၇α-အက်စစ်အက်စစ်ဖြစ်သည်။
1.Liang, T. , et al ။ : ဂျေ Biol ။ Chem ။ , 259, 734 (1984), Perez-Ornelas, V. , et al ။ : Steroids, 70, 217 (2005),
အဘယ်မှာရှိ Trenbolone Acetate အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
ကုန်ကြမ်း trenbolone acetate အမှုန့်ရောနှောဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘယ်သူမျှသင့် Trenbolone Acetate အကြောင်းကို 10 ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုပြောပြလိမ့်မယ်